Xubnihii ka tirsanaa boqortooyada Ingiriiska ee qaatay diinta Islaamka - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka Angus Sladen
Meeshii ugu sareysay ee boqortooyada Ingiriiska ayaa xubno u dhashay Ingiriiska oo haystay diinta masiixiga waxa ay ku biireen diinta Islaamka. Halkan ka akhriso sheekada saddex xubnood oo ku gacan sayray inay u hoggaansamaan sharciyadii xilligaa jiray oo ay qeyb weyn ka ahayd aqoonsiga qofka u dhashay Ingiriiska, haysashada diinta masiixiga.
Lahaanshaha sawirka Abdullah Quilliam Society
Image caption William Henry Quilliam
William Henry Quilliam ayaa billaabay inuu tixgeliyo diinta Islaamka kaddib markii uu arkay dad tukanaya oo ka soo jeeday Moroco, sannadkii 1887.
"Dadka aan badda Mediterranean-ka kula kulmay waxay ahaayeen kuwa aanan waxba ka cabsanin, waxaana isoo jiitay dareenkii ka muuqday wajiyadooda, oo ahaa mid ay gebi ahaanba ku dheehnayd kalsooni iyo daacad nimo," Ayuu yiri.
Kaddib markii ay wax ka ogaadeen diinta, Quilliam oo 31-jir ahaa ayaa qaatay diinta Islaamka, isaga oo ku cabiray inay tahay "mid macquul ah, gaar ahaanna waxaan dareemay in ay waafaqsantahay waxa aan aaminsanahay".
Inkastoo sharci ahaan ay adkeyd in magacyada la iska badalo, haddana Markii uu qaatay diinta Islamaaka ayaa waxa uu magaciisa ku badelay Cabdullaahi.
Ingiriiska ayuu dib ugu soo noqday 1887-dii, waxa uuna bilaabay inuu dadka ku wacyigeliyo in ay diinta Islaamka aaminaan, ku dhawaad 600 oo qof oo ku noolayd UK ayaa qaadatay diinta.
Image caption Xubnaha Masaajidka
Wuxuu sidoo kale dhisay masaajidkii ugu horeeyay Britain oo laga dhisay Liverpool taas oo xilligaas loo arkay magaalada labaad ee boqortooyada UK.
Sannadkii 1884-tii, Sultaankii Cusmaaniyiinta oo taageero ka helayey Boqoradda Ingiriiska ayaa Quilliam u magacaabay madaxa dadka Muslimiinta ee ku nool dadka Ingiriiska.
Inakstoo isaga la soo dhoweeyay, haddana dad badan oo diinta Islaamka qaatay waxay la kulmeen nacayb iyo xadgudub ka dhan ah caqiidadooda sida.
Quilliam ayaa aaminsanaa in dadka weerrarada gaysta ay yihiin "kuwa maskaxdooda la badelay, loona sheegay inaan nahay dad xun."
Wararka horyaalka Ingiriiska
Lahaanshaha sawirka Kad design
Wuxuu Liverpool ka tagay 1908-kii, si uu gacan uga geysto yareynta Islaam nacaybkii ka jiray. Magaciisa ayaana weli ku xusan masaajidka Liverpool.
Image caption Quilliam wuxuu sidoo kale wax ka hirgeliyey masaajidka labaad ee ugu wakhtiga dheer UK
Lahaanshaha sawirka Philip Hope-Cobbold
Image caption Lady Evelyn iyo seygeeda Cobbold waxay qalbiga ka dareentay inay tahay qof Muslim ah
Ma'ahan wax ku cusub in xubnaha aqalka sare ay la dhacaan diinta Islaamka, badanaa waxaa ku dhiiragelin jiray safarada ay ku tagaan dhulalka ay Muslimiinta degaan.
Lady Evelyn ayaa caruurnimadeedii wakhti badan ku soo qaadatay Scotland iyo waqooyiga Afrika.
"Waxaan ku hadlaa luuqadda Carabiga waxaana farxad ii ah in masaajidda aan la booqan jiray saaxibadayda u dhashay Algeria, aniga oo aan ogayn ayaan qalbiga ka noqday Muslim," ayey ku tiri fariin ay qortay.
Aabaheed oo badanaa safaro ku maqnaan jiray ayaa tagi jiray Shiinaha iyo Canada. Hooyadeed oo ahayd amiirad ayaa sidoo kale ahayd qof safar badan aada.
Lady Evelyn waxay dhaxashay qasri ay waalidkeed ku lahaayeen Masar, halkaas oo ay kula kulantay seygeeda John Cobbold oo ahaa ganacsade.
Image caption Lady Evelyn waxay ahayd haweenaydii ugu horreysay ee tagtay Xajka
Waxaan la ogayn xilligii ay qaadatay Islaamka. Balse waxaa xaqiiqada la ogaaday markii ay fasax ku tagtay Rome, oo ay la kulantay Baadariga weyn.
Lady Evelyn, ayaa noqotay haweenaydii ugu horreysay ee tagtay Xajka.
Image caption Lady Evelyn ayaa warqad ka qortay Xajka.
Nolosha haweenaydan ayaanan wax badan laga ogayn. waxaa la sheegay in ay mar booqatay dalka Kenya.
Waxay ku geeriyootay xarunta dadka lagu xanaaneeyo 1963-dii iyada oo 95 sano jira ah."
Lahaanshaha sawirka Robert Stanley family
Image caption Robert Stanley ayaa qaatay diinta Islaamka isaga oo 70 sano jira.
Robert Stanley oo markii hore ka shaqeyn jiray dukaan qudaarta lagu iibiyo ayaa noqday duqa magaalada Stalybridge 1870-kii.
Sida ay xustay Ms Longden, oo buug ku saabsan Robert Stanley qortay ayaa sheegtay inuu ahaa garsoore soo saaray sharci ilaalinaya dadka xadgudubyada kala kulma goobaha shaqada.
Image caption Robert Stanley iyo Abdullah Quilliam oo ku sugan masaajidka
Stanley ayaa la kulmay Quilliam dabayaaqadii 1890-meeyadii, kaddib wuxuu ka fariistay shaqadiisii siyaasadda, waxayna noqdeen saaxiibo isku dhaw.
"Robert wuxuu 28 sano ka weynaa Quilliam, marka waxaan u malaynayaa inuu ka dhexeeyey xiriir wiil iyo aabo oo kale ah," Ayey tiri Ms Longden.
Robert oo qaatay diinta Islaamka isaga oo 70 sano jir ahaa, ayaa magaciisa ku badeshay Reshiid.
Ms Longden waxay aaminsantahay in sida ay sida ay u kortay ku ogaatay in uu Robert ahaa "qofka kaliye ee haystay diinta Islaamka kuna noola Stalybridge", balse Stanley ayaa u guuray Manchester wuxuuna geeriyooday 1911-kii.
Image caption Stalybridge
Arrintan ayaanan la shaacinin, waxaana laga ogaaday Longden, 1998-dii.
Longden walaalkeed ayaa noqday Muslim 1991-dii, kaddib markii uu Jaamacad ku taalla Masar uu dhiganayay muddo 7 sano ah, halkaas oo uu ka ogaaday warbixinta Stanley.
Markii uu maqlay sida ay awoowyaashii ugu biireen diinta Islaamka, waa uu la yaabay.
"Marka aad maqasho qof qaatay diinta Islaamka xilli aysan maskaxdaada aqbali karin oo aysan jirin dad haysta ama yaqaanna isla diintaas".
"Dadka hadda kama cabsanayaan inay istaagan, ayna sheegeen waxa ay aaminsanyihiin, haday ahaan lahayd diin ama siyaasad."